Caasimadaha Aasiya | Wararka Safarka
Mariela Carril | 16/07/2021 08:25 | Safarka Aasiya
Asia waa qaaradda ugu dadka badan uguna ballaaran adduunka. Waa hodan, waxay ku kala duwan tahay dadyowga, luqadaha, muuqaalka dhulka, diimaha. Waxaa jira dalal midba midka kale kaga duwan yahay sida Israel iyo Japan, Russia iyo Pakistan, ama India iyo Korea. Laakiin maanta waxaan ka hadli doonaa kuwa, sida ay ila tahay, ugu fiican caasimadaha Aasiya.
Waxaan ula jeedaa magaalooyinka caalamiga ah ee Tokyo, Beijing, Taipei, Seoul iyo Singapore. Mid kastaaba wuxuu bixiyaa mid u gaar ah, wuxuu leeyahay taariikhdiisa, dhaqankiisa, nacasnimadiisa. Ma ogaanay iyaga?
Beijing ama Peking waa caasimada Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha waana caasimada ugu badan ee ummada ku nool meeraha, iyada oo ku dhow 21 milyan oo qof. Waxay ku taal woqooyiga dalka waxayna leedahay 16 degmo, miyi iyo magaalo.
Waa kan wadnaha dalka heer siyaasadeed iyo dhaqan baaxad ahaan darteedna runtii waa megacity. Dhinaca Shanghai gadaashiisa, waa magaalada labaad ee ugu dadka badan ka dib kacaankii dhaqaale ee ugu dambeeyay waxay hoy u tahay xarumaha shirkadaha ugu muhiimsan Shiinaha ee adduunka oo dhan.
Sidoo kale, Beijing Waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu da'da weyn adduunka, iyada oo in ka badan saddex kun oo sano jiritaanka. Ma ahayn caasimadda kaliya ee boqortooyo ee dalka, laakiin waxay ahayd mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan uguna cimri dheer. Waxay ku wareegsan tahay buuro oo waayihiisii ​​quruxda badnaa ayaa wali ka muuqda maanta macbudyo, daaraha waaweyn, jardiinooyinka, jardiinooyinka iyo qabriyada. Suurtagal maaha in la iska indhatiro Magaalada Xaaraanta ah, Qasrigii Xagaaga, Qabriyadii Ming, ee Gidaar Weyn ama Kanaalka Weyn.
La UNESCO ayaa ku dhawaaqay toddobo goobood oo ku yaal Beijing sida Dhaxalka Aduunka (qaar waa kuwa aan horay u soo sheegnay), laakiin meelo ka baxsan meelaha quruxda badan magaalada lafteeda, jidadkeeda iyo xaafadaha dhaqanka, hutongs, waa yaabe.
Marka laga soo tago dalxiiskeeda dalxiiska iyo casriga ay hadda ku sugan tahay, waa hub gaadiidka ugu muhiimsan waqooyiga dalka. Waxay leedahay tareenno xawaare sare ku socda - magaalooyin sida Shanghai, Guangzhou, Kowloon, Harbin, Inner Mongolia iyo wixii la mid ah. Saldhiga Tareenka ee Beijing waxaa la furay 1959 laakiin waxaa jira xarumo kale oo la dhisay tobaneeyo sano ee soo socda, maadaama nidaamka tareenka la ballaariyay lana casriyeeyay. Waxa kale oo jira metro, oo leh 23 khadad iyo dherer ku dhow 700 oo kiilomitir.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira jidad waaweyn iyo waddooyin ka baxa magaalada iyo kuwo kale oo gudaha u soo guura. Wadooyinkani waa kuwo wareegsan, waxay ku wareegaan magaalada iyagoo tixgelinaya Magaalada Xaaraanta ah ee xarunteedu tahay. Iyo sida iska cad, magaalada waxaa ku yaal garoonka diyaaradaha caalamiga ah. Waxaa mudan in la dhaho laga bilaabo 2013 Haddii aad ka timid waddamo ay ka mid yihiin Brazil, Argentina, Midowga Yurub ama Japan, iyo kuwo kale, waa laguu oggol yahay a 72 saac fiiso inuu soo booqdo magaalada.
Waa kan Caasimada Japan, macno ahaan waxaa loola jeedaa caasimada ama magaalada bariga, waxayna ku taal bartamaha bariga jasiiradda Honshu, ee gobolka Kanto. Isagu ma yahay xarunta siyaasadeed, bulsho, waxbarasho, dhaqan iyo dhaqaale ee dalka.
Tokyo waxay leedahay dad ku dhow 40 milyan qof (Waddan sida Argentina oo kale, tusaale ahaan, waxaa ku nool dad dhan 46 milyan waana kun jeer ka ballaaran yahay), sidaas darteed waxaa jira dad badan oo ku nool meel yar.
Asal ahaan waxay ahayd tuulo kalluumeysi oo la yiraahdo Edo, laakiin waxay muhiim u noqotay qarniyadii dhexe, bilowgii qarnigii XNUMXaad. Qarnigii xigay waxay ahayd magaalo marka la eego tirada dadkeeda horeyba loo barbar dhigay magaalooyinka Yurub. Marwalba may ahayn caasimadda Japan, Kyoto waxay ahayd waqti dheer, Nara waa isku mid, laakiin sanadkii 1868 waxay noqotay caasimada si hufan.
Tokyo waxaa ku dhacay dhulgariir weyn 1923 ka dibna ah Bambooyinkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Isbeddelkeeda weyn iyo koritaankiisu wuxuu bilaabmay 50-yadii, isagoo gacan-saar la leh soo kabashada dhaqaalaha qaranka.
Tokyo kama aysan helin dhacdooyinka isboorti ee caalamiga ah sida Olimbikada (in kasta oo ciyaarihii Olombikada ee 2020 la iloobi doono), in kasta oo aysan heysan khasnado dhismeed oo waa weyn oo ka badbaaday xasuuq aad u badan, runtu waxay tahay in casriyeynteeda ay tahay soo jiidashada ugu fiican.
Ha iloobin inaad booqato Tower Tokyo, Tokyo Skytree, waddooyinka Shibuya, xarrago Ginza, Roppongi Hills ...
Waa kan caasimada Kuuriyada Koonfureed iyo magaalada ugu weyn dalkan. Waxay leedahay dad ku dhow 20 milyan qof waxayna leedahay dhaqaale aad u xoog badan. Halkan waxaa ah xarumaha shirkadaha sida LG, Samsung, Hyundai ...
Seoul waxay leedahay taariikh dhowr cutub oo murugo leh tan iyo Japan ayaa ku soo duushay dalka waxayna ku darsadeen boqortooyadoodii 1910. Kadibna waxay la kulantay galbeed, dhowr dhisme, iyo derbiyo waa la dumiyey, oo kaliya markii uu dhamaaday dagaalka Mareykanka ayaa yimid si ay u xoreeyaan. 1945 magaaladii waxaa loo bixiyay Seoul, in kastoo nolosheeda aysan xasillooneyn maxaa yeelay 50-yadii ayaa Dagaalkii Kuuriya.
Ka dib iyada, ka dib dagaalkii u dhaxeeyay Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ee ka dhanka ahaa Kuuriyada Waqooyi iyo Soofiyeedka, magaalada waxyeello badan ayaa soo gaadhay. Burburinta waxaa ku darsamay daadadka qaxootiga, sidaa darteed waxay si dhaqso leh u heleen dad. Kobcinteeda magaalo iyo dhaqaale waxay soo bilaabatay 60-yadii. Maanta 20% wadarta guud ee dadweynaha ayaa halkan ku nool Koonfurta Kuuriya.
Waa magaalo jiilaal qabow iyo kuleyl daran. Waxaa loo qaybiyaa 25 gu, degmooyin, kala cabir duwan. Mid waa Gangnam caan ah oo aan ka maqalnay pop-ka Kuuriya oo ku dhacay dhawr sano ka hor. Seoul waxay markaa leedahay cufnaan dadweyne oo ka laba jibbaarta tan New York.
Waxay leedahay goobo taariikhi ah oo la booqdo, qaybta udhaxeysa Koonfurta Kuuriya iyo Waqooyiga Kuuriya, Aagga caanka ah ee laga saaray, matxafyada, dhismayaasha dhaqameed, xaafadaha qurxoon iyo nolol badan oo habeenkii ah
Waa waddan isla markaana ah magaalo madax. Waa gobol jasiirad ah, waa magaalo-magaalo ku taal Koonfur-bari Aasiya. Waa jasiirad weyn waxayna leedahay qiyaastii 63 jasiirado ama jasiirado yaryar sidaa darteed waxay ku darmayaan aagga dusha sare.
Dad badan ayaa halkan ku nool waana meel dhaqamo kaladuwan laga tago oo leh afar luqadood oo rasmi ah: Malay, Ingiriis, Mandarin Chinese iyo Tamil. Singapore casriga ah waxaa la aasaasay 1819, iyada oo qayb ka ah ganacsiga Boqortooyadii Ingiriiska ee markaa jirtay. Dagaalkii Labaad ee Adduunka waxaa qabsaday Jabbaan, ka dib waxay ku soo noqotay gacanta Ingiriisigii iyo ugu dambayntii kasbaday is-xakameyntiisa 1959, ee geedi socodka gumaysiga Aasiya dagaalka kadib.
In kasta oo ay qoddobo taban, dhul la’aan, kheyraad dabiici ah, haddana ka mid noqotay Afar Tiger Aasiya ah oo sidaas ayay ugu horumartay xawaaraha fudud. Nidaamkeeda dowladeed waa baarlamaani hal aqal ka kooban dowladduna wax yar ayey gacanta ku haysaa. Xisbi keliya ayaa xukumay aayaha Singapore weligiis.
Dabcan, waa bulsho aad u muxaafid ah. Jinsi isku jinsi waa sharci daro, Ugu yaraan hadda. Waxa kale oo jira milyaneero badan, heerka shaqo la'aanta oo hooseysa iyo in muddo ahba hadda sidoo kale waxaa jira dalxiis badan. Dhab ahaan, magaaladu waa magaalada shanaad ee adduunka loogu booqashada badan yahay iyo tan labaad ee ka jirta gobolka Aasiya Baasifigga.
Waa kan caasimada Taiwan ama Jamhuuriyadda Shiinaha. Waa waqooyiga jasiiradda waxayna leedahay a qiyaastii dadka ku nool laba milyan ama in ka badan, iyadoo la tirinayo aagga magaalooyinka waaweyn. Xaqiiqdii, magaca ayaa loola jeedaa qaabkan oo dhan.
Sida iska cad, waa tan wadnaha siyaasadeed, dhaqaale iyo dhaqan ee dalka iyo mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan Aasiya. Wax walba waxay sii maraan Taipei iyo garoomada diyaaradaha iyo nidaamyada tareenka. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay dhowr dhisme oo caan ah, caan ku ah qaab dhismeed ama dhaqameed, sida dhismaha caanka ah ee Taipei 101 ama Chiang Kai-shek Memorial.
Laakiin sidoo kale Taipei waxay leedahay suuqyo, waxay leedahay matxafyo, jidad, fagaarayaal, jardiinooyin. Iyo taariikh, dabiici ahaan. Marwalba waxay xiriir la laheyd Shiinaha, dhab ahaantii maanta Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha waxay sii wadaa sheegashada jasiiradda inay leedahay, laakiin sidoo kale waxaa qabsaday Jabbaan sanadkii 1895. Dhamaadkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib, Shiinaha ayaa ku soo noqday si uu u xakameeyo, laakiin ka dib dagaalkii sokeeye ee Shiinaha ee ay hantiwadaagyadu ku guuleysteen, waddaniyiintii waxay ku khasbanaadeen inay ka haajiraan dhul weynaha oo ay ku sameeyeen Taiwan.
Dalka soo maray afgambi iyo kalitalisnimo iyo dhibaatooyin dhaqaale taas oo ku qasabtay dadkii deganaa inay u qaxaan meelo kale. Kaaga darane, 90-yadii ayaa waagii kale ee siyaasadeed bilaabmay ilaa 1996-dii waxaa jiray dhowr xisbi iyo doorashooyin qaran.
Taipei waxay leedahay a cimilada kulaylaha ee qoyan marka si fiican uga baxso xagaaga aan loo adkaysan karin. Waxay ku wareegsan tahay buuro waxayna leedahay wabiyo iyo dalxiis gaar ahaan booqashada Chiang Kai- Shek Memorial, kii aasaasay Taiwan ka dib markii laga adkaaday dagaalkii sokeeye, Hoolka Qaranka ee Qaranka, tiyaatarka qaranka, macbudyadiisa kala duwan, iyo xafladaha dhaqanka, Fagaaraha Xorriyadda, Matxafka Qaranka, kan ugu da'da weyn dalka oo ay aasaaseen Jabbaan ...
Taipei 101 waa daaraha dhaadheer ee Taipei. Waxaa la furay 2004 wuxuuna ahaa kan ugu dheer aduunka in mudo ah ilaa laga dhisayo Burj Khalifa. Hayso 509 mitir sare dhamaadka sanadkaana rashka waa daawasho.
Waxaan ka doortay kuwan caasimadaha kale ee Aasiya maxaa yeelay waa qayb ka mid ah qaaraddan aan aad u jeclahay. Ma jiraan wax la mid ah safarka halkan oo laga dareemayo meel ka fog dhaqankeenna iyo waxa aan aaminsan nahay. Oo sida ay yiraahdaan, jahliga waxaa lagu daaweeyaa akhriska iyo cunsuriyadda waxaa lagu daaweeyaa safarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Safarka Aasiya » Caasimadaha Aasiya
Tobanka magaalo ee ugu muhiimsan Faransiiska